Shah Rukh Khan ma wuxuu Dubai ku sameyn rabaa sidii uu sameeyay Tom Cruise? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Shah Rukh Khan ma wuxuu Dubai ku sameyn rabaa sidii uu sameeyay...
Shah Rukh Khan ma wuxuu Dubai ku sameyn rabaa sidii uu sameeyay Tom Cruise?
Xiddigga Bollywood-ka, Shah Rukh Khan, muddo sannado ah ayuu ka maqnaa saaxada filimada cusub, laakiin hadda wuxuu ku mashquulsan yahay filimkiisa Pathan, kaasoo laga yaabo in uu ku sameeyo ficillo halis ah oo horay uu ugu dhiirraday jilaaga Mareykanka ah ee lagu magacaabo Tom Cruise.
Jilaagan magaca weyn ku leh filimada ayaa walaac weyn ka dhaxlay filimkiisii ugu dambeeyay ee ZERO, oo soo baxay 2018-kii laakiin suuqa ku guul darreystay.
Muxuu yahay ficilka uu Shahrukh Khan sameyn karo ee uu sameeyay Tom Cruise?
XIGASHADA SAWIRKA,SHAH RUKH KHAN
Ilo wareedyo ku dhow shirkadda filimka sameyneysa ee Pinkvilla ayaa soo tabiyay in filim hage Siddharth Anand iyo Shah Rukh Khan ay ka shaqeynayaan in ay qeybo filimka Pathan ka mid ah oo dagaal ah ku sameeyaan Dubai.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee la hadal hayo waa in Shah Rukh Khan uu jilliin ku sameeyo gudaha dhismaha ugu dheer caalamka ee Burj Khalifa.
Horay waxaa loo xasuustaa in dhismahaas uu muuqaallo taariikhi ah ku sameeyay xiddigga Hollywood-ka Mareykanka ee lagu magacaabo Tom Cruise, oo lagu yaqaanno inuu sameeyo ficillada ugu halista badan ee filimada.
Xalaqo ka mid ah filimka Mission Impossible ayuu Tom Cruise ku duubay dhacdo aad halis u ah, isagoo naftiisa halis ku galiyay ficil uu dhismaha Burj Khalifa ku fananayo.
Shah Rukh ayaa sidoo kale lagu soo warramay inuu ku fakarayo ficil uu ku sameeyo dusha sare ee dhismahaas, waxaana laga yaabaa inuu u bareero khatartaas weyn.
“Yeysan layaab idinku noqonin haddii aad aragtaan SRK oo ku dagaallamaya qeybta ugu sarreysa ee Burj Khalifa, isagoo xarig lagu xiray balse l qariyay,” ayaa lagu yidhi xogta ay shaaciyeen ilaha ku dhow shirkadda filimka soo saareysa.
Previous articleVedio:Maxoow madaxweyne Muuse Biixi kayiri dilkii argagaxa lahaa ee loo geystay Jeneraal Galaal
Next articleMadaxweyne Deni & wafdi la socday oo safar dhulka ah ku tagay Dhuusamareeb (Sawirro)
XOG: DF oo shirqool u maleegeysa Xaaf oo ku wajahan Dh/mareeb & Ahlu suna oo diidan
DHAGEYSO:Madaxweyne Sheekh Shaakir oo war kasoo saaray doorasho ay DF ku qabato Dhuusomareeb
Xog: Somalia iyo Kenya oo heshiis muhiim ah ku kala saxiixanaya Mandheera
War Soomaali badan Naxdin ku noqday oo naga soo gaaray dalka Mareykanka…
XOG: Farmaajo & Kheyre Oo Shir Albaabada U Xiran Yahay Ka Yeeshay Xaaladda COVID-19 Ee Dalka Ku Sii Faafaya
SAWIRRO:Geelkii ugu horreeyay ee Norway ku dhasha taariikhda iyo qoyska dhaqda oo hurdo yari ka cabanaya